उर्लाबारी । सहकारी एकीकरण अभियान चलिरहेको बेला मोरङको उर्लाबारीको सिंहवाहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र झापाको कमल गाउँपालिकाको पूर्व नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबीच एकता भएको छ ।
आज उर्लाबारीमा एक कार्यक्रमको बीच सहकारी एकीकरणको घोषणा गरिएको हो । दुई सहकारी संस्थाबीच एकता भएसँगै पूर्व नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था नामाकरण गरिएको छ ।
सिंहवाहिनी साकोसका अध्यक्ष भुवन श्रेष्ठ र पूर्व नेपालका अध्यक्ष प्रेम सापकोटाको संयुक्त अध्यक्षतामा भएको एकता घोषणा सभामा प्रदेश नं. १ का रजिष्टार कार्यालय बरिष्ठ अधिकृत ढुण्डीराज दुलालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो ।
कार्यक्रममा उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष बीरबल थापा, उर्लाबारी सहकारी सञ्जालकी अध्यक्ष सीता कार्की, उर्लाबारी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रितम खड्गी, समाजसेबी जयधर्म आचार्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त सहकारीले झापा र मोरङका गरी १० वटा सेवा केन्द्र सुचारु गरेको कार्यकारी प्रमुख चन्द्रकला ढकालले जानकारी दिनुभयो । २०८० सालसम्म ५० करोड शेयर र ५० करोड कोष पु¥याउने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ३५ हजार शेयर सदस्य बनाइने छ । सहकारीको प्रधान कार्यालय झापाको कमल गाउँपालिका वडा नं. २ रहने जनाइएको छ ।
शनिबार, १५ फागुन, २०७७, रातीको ०९:०० बजे